Diego Tristan: a Umgadli onamakhono Spanish "Deportivo"
Ngezikhathi ezithile e ekuholeni European football Championships kukhona amaqembu ngubani ziphansi kakhulu ukuba amakhono abo zezimali amaqembu ahamba phambili. Nokho, umsebenzi omuhle umqeqeshi nokukhetha okuhle wabadlali elingaziwa kodwa abanamakhono bayakwazi ukudala iqembu impi-Uyakufanelekela, ukulwa emigomeni esilinganayo nabahlonishwa football emhlabeni. Diego Tristan, ogama biography libaluleke ngesikhathi wadlalela iqembu elinjalo. Kakhulu leyo minyaka yaseSpain ehlobene "Deportivo" kusukela La Coruna, owalwa emigomeni esilinganayo "Bangempela" no- "Barcelona" eSpain, ngokubeka indlela okuvusa amadlingozi Champions League.
Diego Tristan - footballer, owazalwa ngo-idolobha elincane eliseduze Seville ngo-1976. Njengazo zonke umfana Andalusia ngubani ngiphuphe ukudlala ingxenye kwelinye amakilabhu ezimbili ezinkulu kuleli Seville. Ukuze kufezekiswe umgomo walo, wangena esikhungweni sokuqeqesha football "Betis."
Phambili hhayi ngokushesha wembula ikhono lakhe. Adalberto isikhathi eside, eminyakeni engu-22 ubudala, yena wayedlala i-yesibili, "Betis", okuyinto ngadonsa kanzima e engowesithathu Spanish amandla league.
Tristan Diego babengenawo ukusebenza crazy, kodwa njalo amagoli okungenani eziyishumi isizini. Ekugcineni Scouts "Mallorca" yabhekisela hitter yayikhona intuthuko engatheni, ine Imizimba kakhulu futhi wadlala kahle esitezi sesibili.
Ngakho Diego Tristan waqhubeka echuma, futhi wagxumela phezu isinyathelo up, ukuqala ukudlala kabili "Mallorca", bese edlala Segunda - besigaba sesibili esiqine eSpain.
A Ukushintsha kwenkundla, andalusiets wavula kabusha, waqala ukudlala ukuhlaselwa ngaphezulu asebenzayo, kakhulu ngobudlova futhi ngenkathi kuqala, othumele esangweni izimbangi 15 imigomo.
Ngenxa umdlalo elihle kakhulu yesibili, ngenkathi elandelayo wayedlala for the team yokuqala, "Mallorca" ngokugcwele. Ngo kwesizini, phiko esiqine eSpain, Diego Tristan ngeke ilahleke futhi uqhubeke intuthuko. Naphezu ulwa Friend kanye ezingeni sina wabadlali ukuzivikela, umgadli Waqhubeka enza umsebenzi wakhe futhi amagoli ngesikhathi sayo sokuqala 18 iqembu lakhe elisha.
Inguquko kuhlulekile kuya "Bangempela"
Ekuqaleni amabili senkulungwane "Bangempela" babenezinkinga lo mgadli yesibili Fernando Morientes, zidlala bhanqa Raul, ukuphathwa sikholelwa ukuthi alisilungele neqembu elalenza lo msebenzi. Eqiniseka umdlalo Diego Tristan, ohlale ukudubula umgomo kwabaphikisi, like i-Club of Madrid uMongameli Lorenzo Sanz futhi lo mgadli kwaba on the esengozini shintsho imidondoshiya Spanish. Nokho, umongameli aphanga kanye deal zabhuntsha.
Eqinisweni, i-Diego Tristan konke zaphumela kahle. Ngakho wavuka ithuba ukudlala ku "Deportivo", lapho afike achitha khona iminyaka yakhe engcono isibe omunye phambili kakhulu eYurophu lapho lisaqala.
"Deportivo" ungalokothi kwabalelwa nabahlonishwa football iSpanishi, kodwa leyo minyaka, Corunna kwaba iqembu elikhulu, ezazihlanganisa akhazimulayo Roy Makaay, Valeron, djalminha. Kungazelelwe, yonke isizini 1999/2000 club esincane saba iqhawe yezwe.
iminyaka Golden e La Coruna
Angazi ulahleke "Deportivo" futhi Diego Tristan izithombe okuyinto esikhathini esingeside esedlule wayaziwa kuphela kubangani nomndeni. Naphezu ukuncintisana Roy Macau indawo uhlelo kokuqala, akazange miss ithuba lakhe futhi iphathwe lokushaya 23 imigomo kuzo zonke imincintiswano ngesikhathi sayo sokuqala.
Kakade ngonyaka olandelayo, wathatha indawo ngokuqinile emkhakheni futhi isibe Umgadli main the club. Naphezu Ubukhulu umxhwele, Diego Tristan kwadingeka amasu kakhulu, waba enokuxhumana akesabi ukuya unhlangothi. Isebenza esihle ngaphandle ibhola, omkhulu ukukhetha isikhundla wazithola endaweni isigwebo zikhona njalo lapho kufanele amaphuzu umgomo.
Ngenkathi 2001/2002 kwakhe amagoli 32 kuzo zonke imincintiswano, kwaba scorer best of the Spanish uNdunankulu futhi wathola ucingo iqembu lesizwe.
sokuntenga komnotho ezweni sihlalise Imiphumela
Phambili zihlale izinto eziyinhloko ukuzingela abavikeli futhi ngokuvamile abalimala. Ngezinye izikhathi ukuhlukumezeka bangaba uyisithiyo esikhulu esibangela ukungabi umsebenzi esizayo phambili. Hhayi yabaleka futhi Diego Tristan. Kwelinye okufanayo eqenjini lesizwe, ahlupheka yokulimala, uphuthelwe esiningi, futhi alusebenzisa imbangi yakhe ngqo indawo "Deportivo" Roy Makaay.
I umDashi kudlalwa kahle akhe ngabikho Diego Tristan waqala ukuba uchithe isikhathi esiningi ebhentshini ngemva kokululama emiphumeleni ukuhlukumezeka.
Ngokushesha Roy Makaay ushiye "Deportivo" ngokuya "Bavaria", kodwa andalusiets wayengeke aphinde afinyelele ezingeni odlule. umkhiqizo wayo uwile. Kungase kakade useqala ukukhombisa umhlaba mdala kangakanani. Phela, inhlangano enamandla Tristan bekuwumdlalo ku Umphikisi ihamba, okuyinto edingekayo nokucija, ijubane ukuthi lo mgadli ayeseqalile kakade ukulahlekelwa.
I kancane, Diego Kudlalwe best for "Deportivo" kwesizini Champions League. Ithimba kusukela La Coruna e 2003/2004 ke pholisha esigabeni European. Kwelinye esiteji play-off wahlulwa umnikazi wamanje Cup European Italian "Milan". Kuphela-semi final e umzabalazo kabi "Deportivo" futhi Diego Tristan wakhala winner esizayo kule midlalo - "Porto".
Ezulazulayo yeziNguquko eYurophu
Bekanye Diego Tristan crisis zibanjwe futhi Club of Corunna. Ithimba waqala ukuwa, abaholi kwesokunxele, futhi "Deportivo" luye lwaba abalimi ezivamile maphakathi iqala. Tristan ayebuyele eziphambekweni "Mallorca", kodwa baphelelwa yakhe izinga sniper ngaphandle beshaya ngisho nakanye isizini ngayinye.
Eselahle ukwethenjwa ngumqeqeshi, lo mgadli banquma ukuzama inhlanhla yakhe e-Italian Serie A futhi wamukele isimemo, "Livorno" ebesifuna ukuba esikhundleni wamuka inkanyezi kuhlasela. icala Tristan kungelona ngcono, ukufana amabili, ukuthi amaphuzu kanye kuphela.
Ngemva isizini e-Italy, waya eLondon, lapho ku "West Ham" seliphinde wazama avuselele umsebenzi wakhe. Akazange abe ngomdlali ngokuvamile kwesokunxele ukuze uqinise umdlalo ebhentshini.
Ngemva kokuchitha zonyaka ezimbili kuwubala Italy naseNgilandi Umgadli eSpain, lapho wagcina umsebenzi wakhe "Cádiz", udlala Segunda.
Naphezu esifushane udumo lwakhe, Diego Tristan uyohlale khumbula umdlalo omkhulu, imigomo yakhe enhle wahlala imemori elilodwa alaba best of the ezimbili senkulungwane sika.
Ivitsa Krizhanats: udumo amathathu
Boca Juniors: Umlando
Mett Basbi, umqeqeshi we FC "Manchester United": Biography, umdlalo umsebenzi
Armband likakaputeni ebholeni
Igor Smolnikov: Biography nomsebenzi umdlali webhola lezinyawo lase
Luiz Felipe Scolari: ukuphila, biography kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Ford Tourneo Connect - ababili kwelinye
Indlela yokwenza ikhaya ikati ngezandla zakhe?
Umuthi 'Sabsimpleks "Baby
UVanda Vasilevskaya: biography nezithombe
Isimo sezulu eJalimane kanye nezici zayo
Ushizi Juicy. Indlela Yokuphila Isikhathi kwasekuseni okumnandi.
Isifingqo "French Izifundo" - indaba uValentina Rasputina
Ikhekhe Syroedchesky: ikakhulukazi ukupheka, izindlela kanye nokubuyekeza
Ukuzenzeka ukumelela insimbi yokuxubha. Ungenza kanjani ukuma kwensimbi engenawo ngezandla zakho?